Tifatirayaasha Fiidiyow ee ugu Fiican Instagram ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Tifatirayaasha fiidiyoowga ugu fiican ee loogu talagalay Instagram
September 15, 2017 0 comments 529
Imaatinka fiidiyowga Instagram Bishii Juun, 2013 waxaa helay malaayiin isticmaale oo adduunka ah iyagoo wata durbaanka iyo suxuunta, gaar ahaan sababtoo ah Twitter, iyada oo loo marayo codsigeeda Vine, durba waxay suurtogal ka dhigtay in la wadaago fiidiyowyada laakiin xaddidan waqtigeeda illaa 6 sekan.
Instagram kaliya ma soo bandhigto clipyo dhaadheer oo ah Saacadaha 15, taas oo ay suurtogal u ahayd in lagu dabaqo astaamahooda filtarrada si ay dib ugula xiriiraan ka hor intaadan la wadaagin, laakiin waxay u oggolaatay ikhtiyaarka fiidiyowga otomaatiga ah iyagoo ku daraya kaamirada dambe iyo kamaradda hore. El tifaftiraha fiidiyaha ee instagram ayaa ku dhowaa inuu yimaado.
Cusboonaysiinta ayaa wanaajisay kamaradaha Smartphone-ka iyada oo lagu daro isku-xirka muuqaalka xasilinta muuqaalka, fiidiyowyada waxaa lagu "dhexgali karaa" miirayaasha 13, laakiin uma aysan suurtagelin in wax laga beddelo nidaamka isku xigxiga.
Ku dhowaad seddex sano ka dib, bishii Maarso 2016, Instagram waxay u fidisaa isticmaaleyaasheeda hawsha awood u leh inay soo rogaan fiidiyowyo horey loo duubay, oo lagu keydiyay aaladda qalabka ama Taleefanka iPhone ama Android una dheeree muddada mudada xirmooyinka laga bilaabo 15 ilbidhiqsi ilaa 60. Hal daqiiqo oo dhan si aad ula xiriirto waxaad rabto!
Xaqiiqada ah in aad ka dooran karto fiidiyowyo ka maktabadda Si loola wadaago barta Instagram, waxay u fureysay waji cusub soosaarayaasha barnaamijyada iyo softiweerka, maadaama boqolaal dalabyo ah oo loogu talagalay tafaftirka iyo hagaajinta dhijitaalka ah ee fiidiyowyadaada ay si dhaqso leh ugu yimaadeen suuqa app.
Taabo fiidiyowyadaada ayaa kaa caawin kara inaad hesho jecel badan, raacaya oo kobciya astaantaada Instagram waana sababtaas waxaan u soo bandhigayaa codsiyada ugu fiican ee la ogaanayo sida dib loogu laabto fiidiyowyada sida xirfadle:
Tixraaca Fiidiyaha ugu Fiican iyo Codsiyada Dib U Dejinta
1 Tixraaca Fiidiyaha ugu Fiican iyo Codsiyada Dib U Dejinta
1.6 Ma jiro Tifaftiraha Muuqaalka Video-ga ee loogu talagay Instagram
Qaybtaan waxaad ka heli kartaa codsiyo kaladuwan oo lagu hagaajinayo daabacaad fiidiyowgaaga, haddii aad rabto inaad goyso, wax ku darto, hagaajiso xallinta, muujinta iyo xitaa ku dar ama beddesho codka, ku dar muusikada, saameynta kala-guurka iyo inbadan. Tifatire kasta oo ah fiidiyoow loogu talagalay instagram Waxay leedahay astaamaheeda oo ka dhigaya mid u gaar ah sida dib u habeynta iyo barnaamijka naqshada.
Tani waa codsiga ugu fiican ee loogu talagalay bilowga ahsi kadis ah oo wax ku ool ah oo aan dooneynin inay dejistaan ​​kahor sameynta fiidiyowgooda, ama kuwa u baahan inay had iyo jeer diyaar u noqdaan ficil.
Magistor ka dib markii aad duubeyso fiidiyowgaaga waxaad ku dari kartaa heesta aad rabto, magac ku duub duubista oo si otomaatig ah uga dhigto appku inuu sameeyo isbadalada lagama maarmaanka u ah hagaajinta tayada wax soo saarkaaga.
Waxay kakoobantahay miirayaal iyo saameyn kala-guurka leh qaabab loogu talagalay noocyada kala duwan ee dhacdooyinka iyo munaasabadaha.
Waa mid la jaan qaadaya macruufka iyo Android iyo qaabeynta ayaa kuu oggolaaneysa wadaag fiidiyowyadaada shabakadaha bulshada ee aad ugu jeceshahay.
Soo dejiso Magisto
Android - macruufka
Waa codsi gaar ah oo loogu talagalay tafatirka fiidiyaha aaladaha iOS, mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran, sababtoo ah waa cusbooneysiinta VideoGrade, oo ahaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican qaybteeda; sababo la xiriira astaamaheeda ay ka mid yihiin barnaamijyada ay adeegsadaan sawir qaadayaasha xirfadleyda ah.
Mid ka mid ah tayada i soo jiidday dareenkeyga ayaa ah shaashad la wadaago taas oo kuu oggolaaneysa inaad isbarbar dhigto fiidiyowgaaga asalka ah iyo nooca la baddelay, wuxuu leeyahay taariikh-nololeedyo qalin-jabinta midabka, habka preview, sixitaanka iftiinka iyo cilladaha midabka.
Xakamaynta hagaajinta heerkulka, dhalaalka, isbarbar dhiga, soo-gaadhista, dhererka. Saamaynta: vignette, sepia iyo madow iyo cadaan.
Dejistiisu waa la hagaajin karo isla markaana waxay samayn karaan sixitaanno khiyaamo leh, sida helitaanka gebi ahaanba riwaayad iyo dhammeystir aad u daran fiidiyowgaaga; Kaydi goobtan oo ku mari fiidiyowyadaada iyada oo qayb ka ah "astaanta" shaqsiyeedkaaga.
Soo degso VideoGrade 2
Ficil iyo fududahay in la isticmaalo, barnaamijkan loogu talagalay aaladaha tufaax iyo android, Waa tifaftire fiidiyaha cajiibka ah maxaa yeelay waxay ka kooban tahay qaabab kala duwan oo aad u kala duwan oo aad ku jeceshahay inaad ku duubi karto filimkaaga.
Goobahan InShot ay heli karto waxaa ka mid ah, marka lagu daro tafatirka, jarista si ay ugu habboon tahay fiidiyowgaaga loogu talagalay 'instagram', looxyo kala duwan iyo midabbo leh, ku darista qoraalka iyo emojis; laakiin mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ayaa ah in la waafajiyo muusigga faylashaada mp3 iyo qaabab kale, oo leh taxanaha fiidiyowgaaga.
Waxaad kula wadaagi kartaa cajaladahaaga asxaabtaada laga bilaabo shabakadaha bulshada oo aad u habaynayso xalka aad u rabto fiidiyoyaashaada.
Soo dejiso InShot
Barnaamijkan waxaa loo heli karaa oo keliya dadka isticmaala macruufka, waxaad ku heli doontaa kali ah kali macquul ah oo ku saabsan tafatirka kumbuyuutarkaaga, laakiin taleefankaaga casriga ah.
Waxaa kula socda waad u habayn kartaa fiidiyowyadaada adigoo ku daraya cinwaanno, cod, saameyn saameyn kala guur ah.
Waxay la jaan qaadi kartaa faylalkaaga kamaradaha Go Pro, marka lagu daro kuwa aaladahaaga mobilada, wada-muuji fiidiyowgaaga iyo muusikada aad si toos ah ugu darto, miro-abuurto oo dib-u-dhejiso sawirradaada si kor loogu qaado muuqaalkooda isku xigxiga.
Waxay leedahay a cod bixiye adiga si aad ugu darto faallooyinka oo xitaa kuu oggolaanaya inaad goosato heesaha codka si aad ugu qasdid, waa wax aad u fiican.
Soo dejiso Splice
Waa codsi tafatiran oo loogu talagalay fiidiyowyadaada, haddii aad isticmaaleysid aalad Android.
Waxay ku siisaa fursado tafatir xiiso leh sida: Gogol iyo isku dar fiidiyowyadaada, dalbo miirayaal kala duwan si aad u heshid waxyaabo dhammaystiran oo kaa dhigi doona inaad ka soo baxdo shabakadaha.
Haddii aad rabto inaad keydiso qaar ka mid ah taxanaha ama sawirada kilkilahaaga qolkaaga sawirrada, oo ay ku jirto shaqadooda 'Grabber grabber' waad sameyn kartaa, sidoo kale beddelid audio to mp3 iyo mp4 qaab.
Isku xirnaantaadu waxay kuu oggolaaneysaa inaad la wadaagto fiidiyahaaga mar haddii habka tifaftirka loo dhammeeyo shabakadaha bulshada ee aad rabto.
Soo dejiso VidTrimPro
Ma jiro Tifaftiraha Muuqaalka Video-ga ee loogu talagay Instagram
Waxay ka kooban tahay codsi deg deg ah oo xasaasi ah kaasoo ka soo saaraya fiidiyowyo laga soo qaado sawirada, ku dar darbiyada si aad ula wadaagto barta Instagram iyada oo aan wax goyn ama jarin lahayn. Intaa waxaa sii dheer, tifaftiraha fiidiyowgaan wuxuu ku darayaa dhowr ikhtiyaar oo uu u buuxiyo meeleeyaha fiidiyowga oo ku daro muusikada.
Crop ma leh miirayaasha si ay u siiso fiidiyoowgaaga muuqaal qaas ah iyo saameynta kala guurka si loogu daro taxanaha aad ugu jeceshahay.
Kusoo Degso Muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka Video-ga
Iyada oo codsigan loo heli karo aaladaha iyo taleefannada casriga ah Android, waad abuuri kartaa oo tafatiri kartaa fiidiyowyadaada, kamaradaadu waxay kujirtaa saameynta zoom iyo aragtida ilaa sawirada 15.
Iyada oo la adeegsanayo Instavideo waxaad ku dari kartaa muusig ama haddii aad rabto codkaaga, shaandhayso, hagaajiso waqtiga daawashada taxanahaaga, waxay leedahay in kabadan labaatan saameyn kala guur oo kala duwan, xakameynta mugga maqalka, tifaftiraha muusikada, ikhtiyaar si aad isugu duwdo duubista fiidiyowga, iskugu daro fiidiyowyo, tartiib tartiib ah iyo waxyaabo kaloo badan.
Waa codsi bilaash ah oo si weyn loogu talinayo in lagu qoro fiidiyowga Instagram sababa la xiriira baaxadda balaaran ee howlaha iyo fursadaha la siinayo isticmaaleyaasheeda aaladda iOS iyo Android labadaba.
Qalabka wax lagu qoro ayaa leh tayo xirfadeed oo leh iyaga waxaad ku sameyn kartaa goyn, iskudhaf fiidiyowyo, ku dar musik, ku dabaq saameyn gaar ah, kala-guurid iyo xitaa xasilooni, xitaa nool.
Marka tafatirka fiidiyowyadaada la dhammeeyo waxaad si fudud ugu wadaagi kartaa shabakadahaaga bulshada ee Instagram, Facebook, YouTube, Twitter iyo inbadan
Nooca ugu cusbooneysiinta ayaa kuu oggolaanaya inaad la shaqeysid farsamada sheekada, maktabadda muusikada, ku dar qoraalka, istiikarada firfircoon iyo istiikarada fiidiyowyadaada, hagaajinta xawaaraha kamaradda, oo horay u eeg natiijada (Waxay sidoo kale hagaajin kartaa sawirradaada), waxaa ku jira saamaynta muraayadaha funny.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku sameyso sawirrada sawiradaada iyo fiidiyowyadaada iyo qaabab kala duwan (Waxyaabaha aan jeclahay).
Marka cajaladdaada wax laga beddelo waxaad si fudud ugu wadaagi kartaa barta Instagram, shabakadaha bulshada aad ugu jeceshahay iyo jaaliyadaha fiidiyowga.
Soo dejiso VivaVideo
Codsigan waxaa loo abuuray tafatirka video deg dega, waayo, Instagram, awoodo inay taabtaan ilaa clips iyo filimo gaagaaban siin muuqaalka.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad habayso videos, edit, cut, ka codsan saamaynta gaar ah, filtarrada, ku dar soundtrack si fudud oo si deg deg ah oo ay awoodaan inay geliyaan shabakadaha aad.
Haddii aad rabto inaad la wadaagto xaflad gaar ah uma baahnid inaad sugto, iyadoo Clipper ma waayi Ukaalmayn in publications sida edit aad videos waa kaliya seconds si ay ula wadaagaan.
Waa mid ka mid ah tifaftireyaasha fiidiyowga ugu fiican ee aad u isticmaali karto fiidiyowyadaada 'Instagram', maxaa yeelay waxay si toos ah ula qabsaneysaa qaabka sawirradaada iyo xallintooda Kama tagi doono calaamadaha sawirradaada, si ka duwan barnaamijyada kale.
Waxay leedahay xuduudo kala duwan iyo xayndaabyo si loogu daro shaqsiyada boostadaada, waad midabayn kartaa, ku dari kartaa saameyn, filtarro, dhejisyo, qoraal, sawiro, liidasho la'aan, wareejin kartaa fiidiyahaaga iyo ka dib marka aad dhammeyso daabacaadda waxaad ku wadaagi kartaa Vine, Facebook, Instagram ...
Soo degso InstaFit
Mid ka mid ah codsiyada loogu taliyay in wax laga beddelo sawirrada iyo fiidiyowyada loogu talagalay 'Instagram'.
Iyada oo Instashot ma u leeyihiin in ay ka welwelaan ku saabsan baaxadda images aad iyo haddii ay noqon doontaa socon Instagram format ku caan square ka dhigaya meel ay si toos ah.
Waa app aad u anfacaya oo si toos ah aad u qoraan kartaa video ama geliyaan kasta oo gallery oo ay isticmaalaan qalab la siiyo si ay ula qabsadaan saamaynta, ku dar qoraal, music.
Waa lacag la'aan ah oo aad u isticmaali kartaa in aad qalabka macruufka iyo Android.
Wadahadalka Instagram: Isticmaal iyo talooyin ku saabsan moobaylka iyo kumbuyuutarka
Ayaa booqda boggaga Instagram-ka